u-Lee no-Wolvaardt banqobele ama-Momentum Proteas i-T20 series okokuqala bedlala ne-India
Lucknow: Amantombazane aqhakazayo e-South Africa u-Lizelle Lee no-Laura Wolvaardt bashaye o-50 abahlaselayo ukusiza ama-Momentum Proteas anqobe i-Twenty20 Series okokuqala ehlula i-India benqoba ngebhola lokugcina kwi-T20 International yesibili e-Ekana Cricket Stadium e-Lucknow ngeSonto.
Ovula ngokushaya u-Lee ushaye u-70 emabholeni awu-45 (11 fours, 1 six) ukuhola umjaho ka-159, u-Wolvaardt, oshaya phakathi nendawo kwikhilikithi yama-over awu-20, bese waqeda umsebenzi engakhishwanga ku-53 emabholeni awu-39 (7 fours) – izivakashi zanqoba ngezinti eziyisithupha ngebhola lokugcina kwi-innings.
Ekuqaleni kube u-Shafali Verma (47), u-Harleen Deol (31) no-Richa Ghosh (44*) ukusiza iqembu lasekhaya lifike ku-158/4 emuva kokuthi ama-South Africans anqobe i-toss futhi akhetha ukushwiba kuqala.
Kodwa okunye ukushaya kahle kwezivakashi kuthole umphumela omuhle ukuqiniseka ukuyji i-South Africa ihlule ama-Indians okokuqala kwi-series kumzamo wabo wesithathu.
Kusho ukuthi iqembu lika-Hilton Moreeng lilandelise impumelelo ka-4-1 wama-ODI ekuqaleni kwalelisonto ngokuthi bazithole ngaphambili ngo-2-0 kusele umdlalo wokugcina ngoLwesibili.
Umdlalo wesibili ubusondelene, nokho emuva kokuthi idlale kahle ngokushaya i-India.
Emuva kokulahlekelwa ukapteni wabo u-Smriti Mandhana (7) kushwiba u-Shabnim Ismail (1/31), u-Verma no-Deol babeke iqembu labo endaweni enhle ngenhlanganiso yabo yama-runs awu-79 ngenti yesibili.
Bobabili bagcine bephumile ngokulandelana ngenxa ka-Nonkululeko Mlaba (1/27) no-Anneke Bosch (1/26), kodwa ukushaya kwa-Ghosh ngamabhola awu-26 kushiye iqembu lasekhaya endaweni enhle phakathi komdlalo.
u-Bosch (2), iqhawekazi lomdlalo wokuqala, usheshe waphuma kumjaho. Kodwa u-Lee nokapteni u-Sune Luus (20) banezezele ngama-runs awu-58 ngenti yesibili, u-Lee walandelisa lokho nenye inhlanagniso yama-runs awu-50 ngenti elandelile no-Wolvaardt.
Lokho kuthathe i-South Africa yayibeka ku-116/3 ngesikhathi kuphuma u-Lee. u-Mignon du Preez (10) uqinisekise ukuthi umdlandla uyaqhubeka kwi-South Africa njengoba yena no-Wolvaardt babeke iqembu lidinga u-19 emabholeni awu-10 ngesikhathi ephuma.
Kube mayelana no-Wolvaardt. Ushaye ama-boundaries elandelana kushwiba u-Deol emabholeni amabili kwi-over yesi-19 bedinga ama-runs awu-9 kwi-over yokugcina.
Emuva kokuyiqala kahle i-over u-Arundhati Reddy njengoba ephisane nagam-runs aamathathu emabholeni okuqala amane, ushwibe i-no ball ebalulekile ebuyisele umdlalo ezandleni ze-South Africa kodwa u-Wolvaardt uqede umsebenzi.
21 March – 2nd T20I – India Women lost to the Momentum Proteas by 6 wickets
Ukukhazimula kuka-Bosch kunqobela ama-Momentum Proteas i-T20 yokuqala Uyaziqhenya u-Moreeng njengoba ama-Momentum Proteas aba iqembu lesibili emhlabeni u-De Klerk, u-Du Preez no-Bosch banqoba i-series ngo-4-1 i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas anezinkontileka ku-2021/2022 i-CSA ihalalisela ama-Momentum Proteas ngokunqoba i-ODI series e-India u-Goodall uhlanganise umjaho oyirekhodi njengoba i-SA ithuse i-India ukuqoba i-series u-Lee okhaliphile usize ama-Momentum Proteas abe ngaphambili ngo-2-1 Ama-Proteas ka-Moreeng afunde kokuhlangenwe nakho okwedlule Uhambo lapho kungaziwa khona: u-Sune Luus Ama-Momentum Proteas amemezela iqembu kanye nohlelo lohambo lase-India u-Moreeng ubheke okukhulu kwi-World Cup emuva kwempumelelo nge-Pakistan